by • • आवरण • Comments (0) • 755
शेक्सपियरले आफ्नो दुःखान्त नाटक रोमियो एन्ड जुलिएट मा प्रयोग गरेको यो वाक्य अहिले पनि बेलाबेलामा सान्दर्भिक बनेर व्यवहारमा आइरहन्छ । रोमियो र जुलिएटको प्रेम यस प्रसंगमा भनिए जस्तै आफैंमा नाममा केही पनि हुँदैन तर कतिपय अवस्थामा नामले धेरै विशेषता जनाउँछ, नाम नै सर्वस्व जस्तो पनि बनिदिन्छ । कुनै पनि नामले आम जनमानसमा एउटा अमिट छापको सृजना र मूल्य-मान्यता स्थापित गरेको हुन्छ । तसर्थ मानिसहरू त्यही नामका माध्यमबाट त्यसको प्रयोग वा उपयोग गर्न सहज मान्छन् । अझ् भनौं, त्यही नाममा मात्र आमजन विश्वस्त हुन्छन् ।
विद्यालय तहका परीक्षा बारेमाऐन नियम मा के नयाँ व्यवस्था भएको छ ?
विद्यालय तहमा यी तीनओटा मात्र परीक्षा हुन्छन् भन्ने होइन । विद्यालय तहको पाठ्यक्रमले निर्धारण गरे बमोजिम हरेक कक्षामा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक परीक्षा हुने व्यवस्था कायम नै छ । यसैगरी कक्षा ५ को अन्त्यमा स्रोतकेन्द्रबाट व्यवस्थापन गरिआएको परीक्षालाई पनि यथावत् कायम राखिएको छ । यसरी, विद्यालय तहमा लिइने विभिन्न परीक्षामध्ये कतिपय परीक्षा विद्यालय आफैंले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रकृतिका छन् (जसलाई आन्तरिक परीक्षा प्रणाली भन्न सकिन्छ) भने कतिपय परीक्षा स्रोतकेन्द्र, जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रले व्यवस्थापन गर्ने प्रकृतिका छन्; जसलाई बाह्य परीक्षा भन्ने गरिन्छ । विद्यालयले लिने आन्तरिक परीक्षा विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण गर्ने-गराउने उद्देश्यले भन्दा पनि विद्यार्थीको सिकाइमा सघाउ पुग्ने उद्देश्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर; विद्यालयले लिने आन्तरिक परीक्षालाई पनि बाह्य परीक्षा जस्तै बनाउने जुन अभ्यास रहिआएको छ, त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ; त्यो आवश्यक छैन । यसैगरी बाह्य परीक्षालाई जे जति मात्रामा स्तरीकृत गर्नुपर्ने हो सो हुन पनि बाँकी रहेको छ । अबका दिनमा बाह्य परीक्षालाई स्तरीकृत गरी यसका बारेमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक समेतलाई उपयुक्त ढंगबाट जानकारी प्रदान गर्नु अति आवश्यक छ । यसका साथै आन्तरिक परीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धतिमा पनि समयानुकूल परिमार्जन र सुधार चाहिएको छ ।
विगतमा चलिआएको एसएलसी परीक्षाकोना म र परीक्षा व्यवस्था के हुन्छ ?
माथि नै उल्लेख गरियो, संशोधनपछिको शिक्षा ऐनले कक्षा १० को अन्त्यमा पनि बाह्य परीक्षा हुने व्यवस्था गरेको छ; ऐनमा त्यसको नामका बारेमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन । तर शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षालाई ‘माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् सेकेण्डरी एजुकेशन एक्जामिनेशन (Secondary Education Examination), छोटकरीमा ‘एसईई’ (SEE) भनी नामकरण गरिसकेको छ । यही महीना अर्थात् २०७३ साल चैत ३ गतेबाट सञ्चालन हुँदै गरेको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा ‘माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)’ को नामबाट नै हुनेछ र विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने प्रमाणपत्र पनि यही नामबाट जारी हुनेछ । अझ् स्पष्ट भन्नुपर्दा विगतको ‘एसएलसी’ परीक्षा यस वर्षदेखि ‘एसईई’ को नामबाट सञ्चालन हुनेछ । नाममा फरक भए पनि यी दुवै परीक्षाको मूल्य र मान्यतामा केही फरक पर्ने छैन र दुवैको हैसियत एउटै रहनेछ ।
माथिल्लो तहमा भर्ना हुने योग्यता रविद्यालय छनोटमा के फरक छ ?
कुनै पनि तहको बाह्य परीक्षामा समावेश हुने विद्यार्थीले त्योभन्दा माथिल्लो तहमा भर्ना हुनका लागि आधिकारिक निकायले निर्धारण गरे बमोजिमको योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्छ । विद्यमान शिक्षा ऐन बमोजिम कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको योग्यता निर्धारण गर्ने अधिकार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्मा रहेको छ । यो परिषद्ले निर्धारण गरेको योग्यता (विषयगत रूपमा) बमोजिमको आधार पूरा गरेका विद्यार्थी मात्र कक्षा ११ मा भर्ना हुन योग्य मानिनेछन् । भनाइको मतलब, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएपछि कक्षा ११ मा स्वतः भर्ना हुन पाइन्छ भन्ने होइन । कुनै पनि विद्यार्थीले कक्षा ११ मा आफूले चाहेको विषयमा भर्ना पाउन परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिमका विषयहरूमा तोकिए बमोजिमको ग्रेड कक्षा १० को परीक्षा अर्थात् ‘एसईई’ मा हासिल गरेकै हुनुपर्छ । हाल कक्षा ११ मा विभिन्न विषय समूहमा भर्ना हुनको लागि विषयगत रूपमा न्यूनतम ग्रेड निर्धारण गरिएको छ । उदाहरणको लागि, विज्ञान विषय समूहमा भर्ना हुनको लागि गणित र विज्ञानमा न्यूनतम ‘सी प्लस’ ग्रेड तथा अंग्रेजी, सामाजिक र नेपाली विषयमा न्यूनतम ‘डी प्लस’ ग्रेड ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा समावेश भएपछि विद्यार्थीले कक्षा ११ का कक्षा वा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्अन्तर्गतका कुनै न कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुन त पाउँछन् तर तिनले आफूले चाहेको विषय नभई ग्रेडले अनुमति दिएको विषय मात्र अध्ययन गर्न पाउँछन् ।
विद्यमान ऐन नियम बमोजिम, विद्यार्थीहरू विद्यालय तहमा हुने आन्तरिक र बाह्य दुवै प्रकृतिका परीक्षामा समावेश हुनुपर्छ । वास्तविकता के हो भने, कुनै पनि विद्यार्थीले एउटा कक्षाबाट माथिल्लो कक्षामा जानका लागि अध्ययन गरेको तहमा निश्चित उपलब्धि हासिल गरेकै हुनुपर्छ । विद्यालयले लिने आन्तरिक परीक्षामा विद्यार्थीले हासिल गरेको उपलब्धिलाई विद्यालयले आफ्नै ढंगबाट व्याख्या गरेर विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्न दिने-दिने निर्णय गर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा रहेको छ । तर जब मुलुकले बाह्य परीक्षा संचालन गर्छ, त्यतिबेला परीक्षा लिने निकायले नै विद्यार्थीले हासिल गरेको उपलब्धिलाई प्रमाणीकरण र व्याख्या गर्ने गर्दछ । जुन निकायका लागि जे–जस्तो क्षमता र योग्यताका विद्यार्थी आवश्यक पर्छन् उक्त निकायले नै त्यसको आधार तय गरेर विद्यार्थी लिने-नलिने निर्णय गर्न सक्छ । कक्षा ११ को साधारण तथा व्यावसायिक धारतर्फ अध्ययन गर्नका लागि चाहिने योग्यता तय गर्ने अधिकार शिक्षा नियमावलीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्लाई दिएको छ । यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्अन्तर्गतका कार्यक्रमको डिप्लोमा तथा अन्य कार्यक्रममा भर्ना हुन चाहिने आधार तोक्ने अधिकार यही परिषद्लाई दिएको छ । हालको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना पाउनका लागि कक्षा १० को परीक्षामा निश्चित ग्रेड ल्याएकै हुनुपर्छ । विद्यार्थीले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताको हैसियत अनुसार माथिल्लो तहमा भर्ना पाइन्छ र उक्त भर्ना आफूले चाहेको शैैक्षिक संस्थामा गर्न सकिन्छ ।